Umthengisi weeNdawo eziPhezulu zePET ICopak
Njengomthengisi onoxanduva kwezentlalo, iCopak ikwanoxanduva lokunciphisa uxinzelelo kwingqesho, ukukhuthaza abasebenzi, kunye nokwenza igalelo eluntwini. Ngezenzo zethu zokwenyani, sijolise ekuqinisekiseni umanyano oluhambelanayo lweshishini, abasebenzi kunye noluntu.
Eyethu Indebe yokutya ye-PET isetyenziselwa ukungcamla ukutya. Isetyenziswa ikakhulu ezivenkileni, kwiivenkile ezinkulu, kwimivalo nakwezinye iindawo zokungcamla abathengi iyogathi, ijusi, isiselo, i-ayisi khrim, i-smoothies, ikofu, ubisi kunye nokukhuthaza. Uyilo lwekristale olucacileyo nolukhaphukhaphu kodwa olomeleleyo luya kubonisa ngobuchule iityhubhu zomkhenkce kuzo zonke iziselo ozithandayo. Ezi zixhobo zeklasi zilungile kwisoda, ibhiya, iwayini, iziselo ezixubekileyo, amanzi kunye nokunye!
Uyilo lweShatterproof lubonelela ngokusetyenziswa okuguquguqukayo ukuthintela ukuvuza kunye nokuchitheka kobungakanani bamacala okonga indawo kunika isisombululo esifanelekileyo sokupakisha kumashishini Afanelekileyo kumagumbi okuphumla, iindawo zokwamkela kunye nokusetyenziswa okungaphezulu kokusetyenziswa kwesiselo esibandayo.
Ezinye ezaziwa kakhulu Indebe yokutya ye-PET iinkcukacha ezingezantsi. Ngaphandle kobu bungakanani, sikwenye imiqulu kunye nobukhulu kunye neemilo. Thumela nje iimfuno zakho, imibuzo yakho iya kuphendulwa ngokukhawuleza.
YOKUVALELA CUP YOKUFUNDA
Uyithenga njani yethu INDLELA YOKUNGCOLA IPET?
Sithumele umbuzo wakho, ixabiso elicatshulweyo, i-PI eyenziwe, ukuhlawulwa kwentlawulo eyenziwe, ukuqala kwemveliso, ukushicilela, ukuhlolwa phambi kwephakheji, ukuhlawula imali. Kuthunyelwe ngenqanawa.
Egqithileyo Iingubo zeNdebe yePET
Okulandelayo: 12oz indebe yeplastiki
Cacisa iNdebe yePET